Zvaungaita Kana Paine Zvinhu Zvausingagoni Kuchinja
PANE chachinja upenyu hwako zvokuti unonzwa watopererwa here? Chirwere chisingaperi here, kana kuti kurambana newawakaroorana naye, kana kuti kufirwa? Kana ukasangana nezvinhu zvausingagoni kuchinja, ungaona sokuti hapasisina chauchakwanisa kuita asi kungofunga kuti dai zvinhu zvachinja. Inzwa zvimwe zvaunogona kuita.
MUENZANISO WEMUBHAIBHERI: PAURO
Makore akatanga chiKristu, muapostora Pauro akaenda kunzvimbo dzakawanda achiita basa roumishinari. Asi nzendo dzake dzakadimburirwa panzira paakasungwa ndokuvharirwa muimba yake oga kwemakore maviri achirindwa nomusoja. Izvi hazvina kuita kuti Pauro apererwe, asi akaita kuti pfungwa dzake dzirambe dziri pane zvaaikwanisa kuita. Aiparidzira uye ainyaradza vanhu vose vaimushanyira. Akatonyora tsamba dzakati kuti dziri muBhaibheri.—Mabasa 28:30, 31.
Sezvambotaurwa munyaya yapfuura, Anja haakwanisi kubva pamba nemhaka yokurwara. Anoti, “Pandakangobatwa kenza, upenyu hwangu hwose hwakabva hwachinja. Muviri wangu zvawava nyore kungobatira tumwe tuzvirwere, handichakwanisi kuenda kubasa kana kunotandarawo nevamwe.” Anja ari kurarama sei nedambudziko rake? Anoti, “Kuchinja mashandisiro andinoita nguva yangu kwakandibatsira chaizvo. Ndichifunga nezvoutano hwangu ndakaronga kuti nditange kuita zvinhu zvinonyanya kukosha. Izvi zviri kuita kuti ndione kuti ndine zvandichiri kukwanisa kuita.”
“Ndakadzidza kugutsikana, mumamiriro ezvinhu ose andinenge ndiri.”—VaFiripi 4:11
Kana zvichiita sekuti wava kuitwa muranda nezvinhu zvausingagoni kuchinja, edza kuita zvinotevera:
Ita kuti pfungwa dzako dzirambe dziri pazvinhu zvaunokwanisa kuita. Somuenzaniso, ungasakwanisa kuita kuti chirwere chauinacho chipere, asi unogona here kuita maekisesaizi, kudya zvokudya zvinovaka muviri uye kuzorora zvakakwana?
Sarudza zvinhu zvaunoda kuita muupenyu. Chironga kuti uchazviita sei asi usazviomesera. Zuva rimwe nerimwe shandisa nguva shomanana kuti uite zvichaita kuti uzadzikise zvawakaronga.
Ita kunyange mabasa madiki anokubatsira kuona kuti uchiine zvimwe zvaunokwanisa kuita, akadai sokuchenesa mukicheni uye kusuka ndiro. Pfeka zvakanaka. Paunomuka mangwanani tanga nokuita mabasa anonyanya kukosha.
Funga zvimwe zvinhu zvawava kugona kuita nemhaka yedambudziko rawava naro. Somuenzaniso, pamwe wava kunyatsonzwisisa kuti munhu ane dambudziko rakafanana nerauinaro angatsungirira sei. Unogona here kushandisa ruzivo irworwo kubatsira vamwe?
Zvinonyanya Kukosha: Ungasakwanisa kugadzirisa dambudziko rako, asi zvimwe unogona kugadzirisa maonero aunoita dambudziko racho.